KOOBARKA KOOXAHA SOO SAARAYAASHA IYO SOO SAARAYAASHA - Shiinaha SOO SAARKA KOOXAHA Warshad
28313SC010 iyo 28313SC011 KOOXAHA KOOBKA DARYEELKA ee loogu talagalay Subaru -Z1253
Farta istiraatiijiga isteerinka waa mid ka mid ah qeybaha ugu waaweyn ee hakinta gawaarida iyo nidaamyada isteerinka. Waxay qabataa hawlo dhowr ah oo muhiim ah, iyaga ka mid ah waxay gacan ka geysaneysaa hagida giraangiraha. Baro isteerinka isteerinka ee gaariga halkaan oo aan ku baareyno doorkiisa, qalabka loo sameeyay iyo noocyada, iyo mowduucyo kale. Waa maxay Istaraatiijka Murugada ee Baabuurka? Waa inaad maqashay wax ku saabsan, laga yaabee inaad xitaa ku bedesho gaarigaaga, ama aad ku iibiso dukaanka qaybaha gawaaridaada. Laakiin waa maxay isteerinka isteerinka iyo maxaad ...
OEM 6L2Z5B759AG iyo 6L2Z5B759A KOOXAHA LOOGU TALAGALAY SHAQADA
1.TANGRUI waxay soo saartaa oo keentaa jilbaha isteerinka oo tayo sare leh suuqa adduunka. Dhammaan qaybaha gawaarida ee ka socda TANGRUI waxaa loo dhisay heerar OE oo adag, iyo istiraatiijiyada isteerinka ee aan soo saarno ayaa ka reeban. Waa mid ka mid ah sababaha ay weli uga mid tahay kuwa adduunka ugu aaminka badan iibiyeyaasha istiraatiijiga ah. Marka laga reebo naqshadeynta jiingada isteerinka gaarka ah, waxaad nagu aamini kartaa inaan sameyno alaabooyin bixiya waxqabad aan lala tartamin iyo cimri dheer. 2.Furxanka isteerinka ee guaran ...
Isku-xidhka istiraatiijiyadda istiraatiijiga ah ee ACCENT 1995 (Hore) -Z1370
Wareejinta Universal Steering -Z1558
Gawaarida Gawaarida Gawaarida Gawaarida Midig-Z1561
Jihada Garabka Bidix ee bidix ee loo maro Aveo Chevrolet-Z1571
Qaybo ka mid ah isteerinka kuraasta isteerinka isteerinka isteerinka ayaa isku xira qaybaha isteerinka iyo ganaaxyada. Sidan oo kale, waxay ka kooban yihiin qaybo si loogu dhejiyo qaybaha iyo kiniisadaha labadaba nidaamyada hakin iyo isteerinka. Giraangirta, sidoo kale. Qaybaha isteerinka weyn ee istiraatiijiga waxaa ka mid ah Dusha sare ee wiishka kubbadda ama fuulitaanka godka xajmiga ee gacanta gacanta sare ee ganaaxa iyo jaranjarada nooca ganaaxa MacPherson ee loogu talagalay dhejinta dhejiska ama gacanta isteerinka ee Isukeenista kubbadda ama xakameynta hoose Qodobbada ...
4230506130 KOOXAHA ISTICMAALKA Toyota Avalon-Z1254
Tangrui Steering Bnuckle Right Xaqii MAZDA-Z1620
96488824 KOOXAHA LOOGU TALAGALAY DAEWOO LACETTI-Z1263
Duubista Wadista Universal ee loogu talagalay Subaru Forester -Z1330
Tayada Sare ee Aluminium Aluminium Fudud Qaybta Wareejinta-Z1432
Gawaarida Hub, Naxdinta Rubber Rubber, Hood Shooga Nuugista, Wadajirka Kubadda Tire, Jabinta Steering Front, Naxdinta Nuugista Bolt,